Wararka - Ka hadalka Xirfadaha Isticmaalka router alwaaxa
Ka hadalka Xirfadaha Isticmaalka router alwaaxa
Markaan isticmaalno alwaax CNC router, waa lama huraan in aynaan la kulmi doonin shaqooyin dhib badan, oo waqti badan qaadata oo hawl badan, oo aad u walwal badan. Xaqiiqdii, markaad isticmaaleyso aalwaax CNC router si loo sameeyo shaqadan noocan ah, waxaa jira xirfado cayiman oo la raaci karo, xirfadahanina waxay gebi ahaanba ka dhigi karaan shaqadeena mid wax ku ool ah. Hada, aan baranno xoogaa xirfado wadaag ah.
1. Xardho qaabab caag ah
Qaababka caagga ah ee xardho, waxaad ku dhejin kartaa cajaladda wareejinta dhabarka shayga la xardhay, ka dibna ku buufin dhinaca cajaladda xabagta buufinta dareeraha ah, ka dibna ku dheji dusha sare ee la tuuri karo, si looga fogaado isticmaalka cajalad laba-geesood ah. Waxay ka tagtaa dusha sare oo ay adag tahay in la nadiifiyo.
2. Hagaajinta farshaxanno qaabeysan oo aan caadi ahayn
Walxahaas la xardhay oo leh qaabab aan caadi ahayn, waxay umuuqdaan kuwo si adag loogu adkeeyay dusha sare, wayna ruxruxi doonaan gadaal iyo gadaalba markii cadaadis hoos loo saaro Waqtigan, waxaad isku dayi kartaa inaad xoogaa qashin ah dhigatid sheyga si aad u kordhiso khilaafku. Midda kale waa in la xafido baakadaha la socda shayga. In kasta oo shaygu qaab aan caadi ahayn u qaabeysan yahay, baakadaha uu sido waxay noqon karaan kuwo caadi ah oo sahlan in la hagaajiyo. Kudar suun yar si aad u sameyso shay qaab aan qaabeysnayn u eg. Si fudud loo hagaajiyo
3. Dayactirka shayga la xardhay
Maaddaama mashiinnada xardho alwaaxa ay inta badan ku qalabaysan yihiin aalado badan ama guntinno, waxayna ka samaysan yihiin bir, way fududahay in waxyeello loo geysto shayga la xardhay ama laga dhigo mid siibanaya inta lagu gudajiro hawsha xardhashada, sidaas darteed u xusho daboollo caag ah ama tuubooyinka caagga hagaajinta walxaha xardhan waxay xallin doontaa noocan dhibaatada dhaawaca ilaa xad.